Ny fitaovana voalohany ho an'ny HomeKit dia mety ho tonga amin'ny herinandro | Vaovao IPhone
HomeKit dia natolotra tao amin'ny WWDC 2014, efa ho herintaona lasa izay, miaraka amin'ny fampisehoana ny iOS 8. HomeKit no sehatra hampiasan'ny mpamorona sy ny mpanamboatra famoronana fitaovana mifanaraka amin'ny fitaovana Apple izay afaka manampy anay hamolavola ny tranonay. Volam-by, thermostat, mpanamboatra kafe, fakantsary fanaraha-maso ... karazana gadget marobe mifandraika amin'ny iPhone sy iPad, saingy tsy dia nahita na inona na inona isika. Na izany aza toa izany herintaona taty aoriana dia afaka nanomboka tonga ireo kojakoja mifanaraka amin'ny HomeKit voalohany, ka nifarana hatreo ny fiandrasana.
Raha efa nahazatra antsika ny «azo anaovana», ny teny anglisy izay sarotra adika amin'ny teny Espaniôla («fitaovana hotafiana» dia dikanteny mampihoron-koditra ahy) miaraka amin'ireo katalaogin'ny smartwatches sy ny fehin-tànana manisa izay tototry antsika, ankehitriny tsy maintsy mampiditra teny vaovao hafa amin'ny rakibolantsika isika, na dia amin'ny Espaniôla aza izy io: «Ny Internet amin'ny zavatra». Ny Internet dia tsy ho zavatra ho an'ny solosaina, finday avo lenta na tablette intsony, ary ny zavatra "inert" mandraka ankehitriny dia "hanana fiainana" noho ny chip kely ao anatiny izay hahafahan'izy ireo mifandray amin'ny tambajotranay, afaka mifandray amin'izy ireo.
Ny iPhone, iPad, Apple Watch ary Apple TV dia ho lasa fanaraha-maso ny jiro ao an-tranontsika, ny mari-pana na ny zavatra toy ny fototra toy ny fanaovana kafe amin'ny maraina. Ho fanampin'ny fahitana ireo fitaovana mifanentana voalohany ao anatin'ny andro vitsivitsy, WWDC 15 dia ho fampirantiana tonga lafatra amin'ny fanambaràn'ny HomeKit (farany) tanteraka izao. Manararaotra ny Apple TV vaovao izay heverina fa haseho amin'ny Keynote voalohany, ary izany no ho ivon-toeran'ny fitaovana mifandraika rehetra, Apple dia afaka mampiseho amintsika ny drafitra ananany hifehezana ny tranontsika avy amin'ireo fitaovany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Ny fitaovana voalohany ho an'ny HomeKit dia mety ho tonga amin'ny herinandro ambony
"Geometry Wars 3: Dimensions" dia azo alaina ao amin'ny App Store. Famerenana.
Ny horonantsary dia manamarina fa ny Apple Watch dia azo ampangaina amin'ny seranan-tsambo diagnostika